မိတ္ထီလာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရှိ (COVID 19) စောင့်ကြည့် လူနာ အမျိုးသမီး (၂) ဦး သေဆုံး – Let Pan Daily
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ္ထီလာ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးရှိ (COVID 19) စောင့်ကြည့် လူနာ အမျိုးသမီး (၂)ဦး သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း မေ (၁၇) ရက် နံနက်က မိတ္ထီလာ ခရိုင်ဆေးရုံ အုပ်ကြီးဒေါက်တာ ညွန့်စိန် ထံမှ သိရသည်။ မိတ္ထီလာပြည်သူ့ဆေးရုံ စောင့်ကြည့်လူနာဆောင်တွင် မေ (၁၆)ရက် ည (၇) နာရီ ခွဲခန့် က ဒေါ်ခင်….(၆၄)နှစ် ဝမ်းတွင်း မြို့နယ် အိုင်သာယာ ကျေးရွာမှ ဆေးရုံ တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူ နေစဉ် သေဆုံး ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
ဒေါ်ခင်…..သည် မေ (၁၅) ရက် ည (၁၁) နာရီခန့် တွင် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာစဉ် ကိုယ် အပူချိန် (၁၀၂) ဒီဂရီ ရှိ နေကာ လွန်ခဲ့ သည့် ငါးနှစ်ခန့် ကတည်းက သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်း အား မေ (၁၆) ရက် ညနေ (၃) နာရီခန့် တွင် နှာခေါင်း တို့ ဖတ်ယူ ၍ ရန်ကုန် ဓာတ်ခွဲ ဌာနသို့ ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ မိတ္ထီလာ ပြည်သူ့ဆေးရုံ စောင့်ကြည့် လူနာဆောင်တွင် မေ (၁၇) ရက် နံနက် (၆) နာရီ (၂၅) မိနစ်ခန့်တွင် ဒေါ်…..(၅၈) နှစ် မိတ္ထီလာမြို့ ရတနာမာန်အောင်ရပ် ကွက် ကန်တော်မင်ရပ် မှ ဆေးရုံ တက်ရောက်ဆေး ကုသမှုခံ ယူနေသည့် လူနာသည် လည်း သေ ဆုံး ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ဒေါ်…….သည် မေ (၁၆) ရက် ည (၈) နာရီ ခန့််တွင် ဆေးရုံ သို့ ရောက် ရှိခဲ့ပြီး ကိုယ် အပူချိန် (၁၀၂) ဒီဂရီ ရှိသည့် အပြင် ဆီးချိုရောဂါ ရှိသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏ နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူ၍ ရန်ကုန်ဓာတ်ခွဲ ဌာနသို့ ပေးပို့ထားကြောင်း ဒေါက်တာ ညွန့်စိန် က ပြောသည်။
အဆိုပါ သေဆုံး သည့် စောင့်ကြည့် လူနာ (၂)ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင် များသည် ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ မိတ္ထီလာ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဖျားနာဆောင် တွင် ဖျားနာလူနာ လေးဦးရှိကြောင်း၊ စောင့်ကြည့်လူနာဆောင်တွင် အသက်ကိုး နှစ်ခွဲအရွယ် ကလေးငယ် (၁)ဦးရှိပြီး မေ (၁၆) ရက် ညနေ (၃) နာရီခန့်တွင် နှာခေါင်းတို့ ဖတ်ယူ၍ ရန်ကုန် ဓာတ်ခွဲ ဌာနသို့ပေးပို့ ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။ ဒေါ်ခင်……..၏ အလောင်းအား မေ ၁၇ ရက် နံက် ၉ နာရီခန့်တွင် လည်းကောင်း၊ ဒေါ်……..၏ အလောင်း အား မေ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ တွင် လည်းကောင်း မိတ္ထီလာ မြင်တော် ကန်သုသာန်သို့ ပို့ဆောင်မီးသင်္ဂြိုဟ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိတ်ထီလာ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး ရှိ (COVID 19) စောငျ့ကွညျ့ လူနာ အမြိုးသမီး (၂) ဦး သဆေုံး
မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီး မိတ်ထီလာ ပွညျသူ့ ဆေးရုံကွီးရှိ (COVID 19) စောငျ့ကွညျ့ လူနာ အမြိုးသမီး (၂)ဦး သဆေုံး ခဲ့ကွောငျး မေ (၁၇) ရကျ နံနကျက မိတ်ထီလာ ခရိုငျဆေးရုံ အုပျကွီးဒေါကျတာ ညှနျ့စိနျ ထံမှ သိရသညျ။ မိတ်ထီလာပွညျသူ့ဆေးရုံ စောငျ့ကွညျ့လူနာဆောငျတှငျ မေ (၁၆)ရကျ ည (၇) နာရီ ခှဲခနျ့ က ဒျေါခငျ….(၆၄)နှဈ ဝမျးတှငျး မွို့နယျ အိုငျသာယာ ကြေးရှာမှ ဆေးရုံ တကျရောကျဆေးကုသမှု ခံယူ နစေဉျ သဆေုံး ခဲ့ခွငျး ဖွဈ သညျ။
ဒျေါခငျ…..သညျ မေ (၁၅) ရကျ ည (၁၁) နာရီခနျ့ တှငျ ဆေးရုံသို့ ရောကျရှိလာစဉျ ကိုယျ အပူခြိနျ (၁၀၂) ဒီဂရီ ရှိ နကော လှနျခဲ့ သညျ့ ငါးနှဈခနျ့ ကတညျးက သှေးတိုးနှငျ့ ဆီးခြိုရောဂါရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ၎င်းငျး အား မေ (၁၆) ရကျ ညနေ (၃) နာရီခနျ့ တှငျ နှာခေါငျး တို့ ဖတျယူ ၍ ရနျကုနျ ဓာတျခှဲ ဌာနသို့ ပေးပို့ထားကွောငျး သိရသညျ။
အလားတူ မိတ်ထီလာ ပွညျသူ့ဆေးရုံ စောငျ့ကွညျ့ လူနာဆောငျတှငျ မေ (၁၇) ရကျ နံနကျ (၆) နာရီ (၂၅) မိနဈခနျ့တှငျ ဒျေါ…..(၅၈) နှဈ မိတ်ထီလာမွို့ ရတနာမာနျအောငျရပျ ကှကျ ကနျတျောမငျရပျ မှ ဆေးရုံ တကျရောကျဆေး ကုသမှုခံ ယူနသေညျ့ လူနာသညျ လညျး သေ ဆုံး ခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။ ဒျေါ…….သညျ မေ (၁၆) ရကျ ည (၈) နာရီ ခနျ့တှငျ ဆေးရုံ သို့ ရောကျ ရှိခဲ့ပွီး ကိုယျ အပူခြိနျ (၁၀၂) ဒီဂရီ ရှိသညျ့ အပွငျ ဆီးခြိုရောဂါ ရှိသညျကို စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး၊ ၎င်းငျး၏ နှာခေါငျးတို့ဖတျယူ၍ ရနျကုနျဓာတျခှဲ ဌာနသို့ ပေးပို့ထားကွောငျး ဒေါကျတာ ညှနျ့စိနျ က ပွောသညျ။
အဆိုပါ သဆေုံး သညျ့ စောငျ့ကွညျ့ လူနာ (၂)ဦးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ မိသားစုဝငျ မြားသညျ ခရီးသှားရာဇဝငျ မရှိခဲ့ကွောငျး သိရ သညျ။ မိတ်ထီလာ ပွညျသူ့ဆေးရုံ ဖြားနာဆောငျ တှငျ ဖြားနာလူနာ လေးဦးရှိကွောငျး၊ စောငျ့ကွညျ့လူနာဆောငျတှငျ အသကျကိုး နှဈခှဲအရှယျ ကလေးငယျ (၁)ဦးရှိပွီး မေ (၁၆) ရကျ ညနေ (၃) နာရီခနျ့တှငျ နှာခေါငျးတို့ ဖတျယူ၍ ရနျကုနျ ဓာတျခှဲ ဌာနသို့ပေးပို့ ထားကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျလကျ ပွောသညျ။ ဒျေါခငျ……..၏ အလောငျးအား မေ ၁၇ ရကျ နံကျ ၉ နာရီခနျ့တှငျ လညျးကောငျး၊ ဒျေါ……..၏ အလောငျး အား မေ ၁၇ ရကျ နံနကျ ၁၀ နာရီခှဲ တှငျ လညျးကောငျး မိတ်ထီလာ မွငျတျော ကနျသုသာနျသို့ ပို့ဆောငျမီးသင်ျဂွိုဟျ ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ ဖုန်းနံပတ်များအား လိုင်းသုံးခွင့် 100GB အခမဲ့ပေးမည်